You are at:Home»2014»December (Page 4)
နိုင်ငံရေးပါတီများ ခန်းမများတွင် မဲဆွယ်ဟောပြောနိုင်ပြီ ======= ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေ…
နိုင်ငံရေးပါတီများ ခန်းမများတွင် မဲဆွယ်ဟောပြောနိုင်ပြီ ======= ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံရေး ပါတီများ ပြင်ပခန်းမများတွင် ဥပဒေနှင့် အညီ မဲဆွယ်စည်းရုံးဟောပြောမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း…
NLD ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်- ပထမအကြိမ်ဗဟိုကော်မတီ- စ…
via RFA Burmese’s Facebook Wall http://ift.tt/1sw8KQ4 http://ift.tt/g8FRpY
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီဝင်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် က…
via RFA Burmese’s Facebook Wall http://ift.tt/1wxxrLE http://ift.tt/g8FRpY
ရခိုင်ပဋိပက္ခတည်ငြိမ်ရေး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တိုက်တွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေဟာ တည်ငြိမ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီအခြေ အနေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ကြဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ နှစ် ၄၀ ပြည့် ရခိုင်ပြည်…
အပစ်ရပ်မူကြမ်းအတွက် ဆွေးနွေးရန်ကျန်သည့် အချက်များအတွက် သမ္မတထံမှ မူဝါဒ ရရှိပြီးဖြစ်ဟု ဆို
အပစ်ရပ်မူကြမ်းတွင် ညှိနှိုင်းရန် ကျန်သည့်အချက်များ သမ္မတက မူဝါဒချမှတ်ပြီးဖြစ်၍ မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်တွင် NCCT နှင့် MPC တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် MPC ဘက်မှ သမ္မတ၏…
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲ မြို့နယ်၊ နမ့်ဆန် မြို့နယ်နှင့် ကွတ်ခိုင် မြို့နယ် တို့၌ ဒီဇင်ဘာ (၈) ရက်နေ့မှ (၁၀) ရက်နေ့ အထိ…
မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းမှ သတင်းသမားများစုစည်း၍ မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းဂျာနယ် လစ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ Southern Myanmar Journalist Forum တစ်ရပ်ကို မော်လမြိုင်မြို့၊ ရွှေမြင့်မိုရ်ထွန်းဟိုတယ်တွင် ဒီဇင်ဘာလ…
နိုင်ငံရေးကို ခွဲခြားပြောဆိုနေခြင်း သွေးကွဲစေသည့် ညစ်ပတ်မှုသာဖြစ်ဟုဆို
ပါတီနိုင်ငံရေး၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ခွဲခြားပြောဆိုနေမှုများသည် နိုင်ငံရေးသွေးခွဲမှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ညစ်ပတ်သည့် နိုင်ငံရေးသာဖြစ်သည်ဟု ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီး က ပြောကြားသည်။ ဒီဇင်ဘာ…
နိုင်ငံရေးလမ်းလွှဲမှု ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ကန့်ကွက်
အကျိုးထိရောက်မှုရှိတဲ့ ဆွေးနွေး ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိအောင် အမျိုးမျိုးလမ်းလွှဲတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကို လုံးဝ အားပေးထောက်ခံမှာ မဟုတ်ဖူးလို့ အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ via…
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပထမအကြိမ်ဗဟိုကော်မတီ စတုတ္ထအစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို…
via RFA Burmese’s Facebook Wall http://ift.tt/1xcLB6s http://ift.tt/g8FRpY
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-13 06:43:31
ယနေ့(၁၃.၁၂.၂၀၁၄)၊နံနက် ၈း၃၀တွင်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောအဆောင်၌ကိုဌေးအောင်၊အသက်-၅၁နှစ်(နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊မ.က.ဒနှင့်ကျောင်းသားများဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံပါတီ ဒု-ဥက္ကဌ၊၈၈-ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်)သည်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းနှင့်ကြွင်းကျန်သောရုပ်ကလာပ်အား(၁၇.၁၂.၂၀၁၄)ရက်နေ့၊ညနေ ၃း၀၀အချိန်တွင်ထိန်ပင်သုဿန်၌မီးသဂြိုလ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။(နေအိမ်မှကားများနေ့လယ်၁း၃၀အချိန်တွင်ထွက်ပါမည်)။နေအိမ်လိပ်စာ။ ။တိုက်(၄)၊အခန်း(၁၄)၊ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊ကမာရွတ်မြို့နယ်။
ဥရောပကုန်သည်ကြီးများအသင်း မြန်မာပြည်မှာဖွင့်ပြီ (TV Report) မြန်မာနိုင်ငံအတွက်…
ဥရောပကုန်သည်ကြီးများအသင်း မြန်မာပြည်မှာဖွင့်ပြီ (TV Report) မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဥရောပဈေးကွက်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့ မှတ်ယူနိုင်တဲ့ European Chamber of Commerce ကို ဒီဇင်ဘာ…
[ Voice of the Day ] “အက်စ်ဘီရော၊ သတင်းပေးရော ငါရှေ့ကိုလာ၊ မင်းတို့လည်း ငါ့ကို…
[ Voice of the Day ] “အက်စ်ဘီရော၊ သတင်းပေးရော ငါရှေ့ကိုလာ၊ မင်းတို့လည်း ငါ့ကို ထောက်လှမ်းနေတာပဲ။ ငါသိတာပေါ့၊ ငါက ထောက်လှမ်းရေး…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-13 06:34:16
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းကိုဌေးအောင်ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ)မှ ၀မ်းနည်းကြောင်းသ၀ဏ်လွှာ ၁၃၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်ြး
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-13 05:45:16
Burma political prisoners – Htay AungAn interview with Htay Aung,aBurmese political prisoner who served nearly 10 years for his involvement in the 1988 student demonstrations.
Linnea M.Beatty(Program Officer) &amp; STACEY MAY (H.R Officer for Burma), both from…
Linnea M.Beatty(Program Officer) & STACEY MAY (H.R Officer for Burma), both from D.R.L, hadameeting with Ko Tate Naing (Secretary),Ko Aung Myo Kyaw (Admin Officer), Ko Saw Thet Tun (Deputy Chief Clinical Supervisor), Ko Chit Ko Lin (Supervisor), Ko Htin Aung (Supervisor), Ma Khin Nyein Chan Soe (Supervisor), from AAPP-B at AAPP-B office in Rangoon on 12 Dec 2014. The meeting subject includes current AAPP-B’s activities, such as Data Collecting, Mental Health Assistance Programme, and Political Prisoners Scrutinize Board.
Meeting with D.R.L
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-12-13 03:03:12
ပြည်သူ့သားကောင်း စစ်သည်တော် ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်း မိသားစု ထံ သွားရောက်ပြီး ဂုဏ်ပြုအားပေးစကား ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်သူလူထုမှ ဂုဏ်ပြုချီးမြင့်သော ကျပ်တသိန်းအား ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်း ဇနီးထံပေးအပ်ရာ ဂုဏ်ပြုငွေ အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြု ပေးပါဟု ချက်ချင်း ပြန်လှူသဖြင့် ပြန်လည်ယူဆောင်လာခဲ့ပါသည်။
ပြည်ပတွင် (၁၀) နှစ်ကျော်ကြာရပ်တည်လာခဲ့သော နိရဉ္စရာသတင်းဌာန အနေဖြင့် ပြည်တွင်း ၀င်ရောက်ပြီး (၁၀) လအကြာ ပထမဆုံးဂျာနယ်ကို ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့တွင် စတင် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီလိုက်ပြီ…
V.Gastro Bar မှ တရားစွဲဆိုခံရသူ သုံးဦး အင်းစိန်ထောင်တွင် ထိန်းသိမ်းခံရ ရန်ကုန်…
V.Gastro Bar မှ တရားစွဲဆိုခံရသူ သုံးဦး အင်းစိန်ထောင်တွင် ထိန်းသိမ်းခံရ ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို နားကြပ်တပ်ထားပုံဖြင့် ဖျော်ဖြေပွဲ…